Translate izrailjske from Serbian to Burmese - MyMemory
Results for izrailjske translation from Serbian to Burmese
A u osmi dan sazva Mojsije Arona i sinove njegove i stareine izrailjske.
အဋ္ဌမနေ့၌ မောရှေသည် အာရုန်နှင့်သူ၏သားများ၊ ဣသရေလ အမျိုးအသက်ကြီးသူများတို့ကို ခေါ်၍၊
Tada on otide k svom gospodaru i javi mu govoreæi: Tako i tako kae devojka iz zemlje izrailjske.
နေမန်သည် မိမိအရှင်ထံသို့ ဝင်၍ဣသရေလ အမျိုးမိန်းမငယ်စကားကို ပြန်လျှောက်၏။
I Joav videæi nametenu vojsku prema sebi spred i ozad, uze odabrane iz sve vojske izrailjske, i namesti ih prema Sircima;
ယွာဘသည်လည်း၊ ရှေ့၌၎င်း၊ နောက်၌၎င်း စစ်မျက်နှာနှစ်ဘက်ရှိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ဣသရေလလူတို့ တွင် သန်မြန်သောသူရှိသမျှတို့ကို ရွေးကောက်၍ ရှုရိလူ တို့ တဘက်၌စစ်ခင်းကျင်း၏။
I Joav videæi nametenu vojsku prema sebi spred i sastrag, uze odabrane iz sve vojske izrailjske, i namesti ih prema Sircima.
ယွာဘသည်လည်းရှေ့၌၎င်း၊ နောက်၌၎င်း၊ စစ်မျက်နှာနှစ်ဘက်ရှိသည်ကိုမြင်လျှင်၊ ဣသရေလလူတို့ တွင် သန်မြန်သောသူရှိသမျှတို့ကို ရွေးကောက်၍ ရှုရိလူ တို့တဘက်၌ စစ်ခင်းကျင်း၏။
I posla Faraon da vide, i gle, od stoke izrailjske ne uginu nijedno; ipak otvrdnu srce Faraonu, i ne pusti narod.
ဖါရောဘုရင်သည် လူကိုစေလွှတ်၍၊ ဣသ ရေလအမျိုးသားတို့၏ တိရစ္ဆာန်တကောင်မျှ မသေ ကြောင်းကို သိရ၏။ သို့သော်လည်း နှလုံးခိုင်မာပြန်၍၊ ဣသရေလလူတို့ကို မလွှတ်ဘဲနေလေ၏။
I sazva Mojsije sve stareine izrailjske, i reèe im: Izberite i uzmite sebi jagnje ili jare po porodicama svojim, i zakoljite pashu.
ထိုအခါ မောရှေသည် ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့ကိုခေါ်၍၊ သင်တို့သည် အိမ်ထောင်များ အသီးအသီး ကိုယ်စီကိုယ်စီ သိုးသငယ်တို့ကို ယူ၍ ပသခါပွဲဘို့ သတ်ကြလော့။
I uze Jotor, tast Mojsijev i prinese Bogu rtvu paljenicu i prinos; i dodje Aron i sve stareine izrailjske, i jedoe s tastom Mojsijevim pred Bogom.
မောရှေ၏ ယောက္ခမ ယေသရောသည်၊ မီးရှို့စရာယဇ်နှင့် ဘုရားသခင်အဘို့ ယဇ်များကို ဆောင်ခဲ့၍၊ အာရုန်နှင့် ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်၊ မောရှေ၏ ယောက္ခမနှင့်အတူ ဘုရားသခင့် ရှေ့တော်၌ အစာစားခြင်းငှာ လာကြ၏။
A Gospod reèe Mojsiju: Prodji pred narod, i uzmi sa sobom stareine izrailjske, i tap svoj kojim si udario vodu uzmi u ruku svoju, i idi.
ထာဝရဘုရားကလည်း၊ လူများရှေ့သို့သွား၍ ဣသရေလအမျိုး အသက်ကြီးသူတို့ကို ခေါ်လော့။ မြစ်ကို ရိုက်သော သင်၏လှံတံကို ကိုင်လျက်၊ ဟောရပ်အရပ်သို့ သွားလော့။
Idi, i skupi stareine izrailjske, pa im reci: Gospod Bog otaca vaih javi mi se, Bog Avramov, Isakov i Jakovljev, govoreæi: Doista obidjoh vas, i videh kako vam je u Misiru.
quid nesco (Latin>English)nazar milna (Hindi>English)mod (French>German)袒护 (Chinese (Simplified)>Arabic)seismologi (Danish>English)nang gugulat (Tagalog>English)fu somministrata (Italian>English)mulethi powder meaning (English>Telugu)黙れ (Japanese>English)ubonakalo (Xhosa>Portuguese)ورؤساؤهم (Arabic>Afrikaans)corbett (English>Portuguese)确认新密码 (Chinese (Simplified)>English)device slot (English>Russian)lesung (German>Danish)see you later my dear friend (English>French)buhatin in english (English>Tagalog)badjao words (English>Tagalog)helper (English>Cebuano)hasta la fuego (Spanish>English)एक्सएक्सएक्स, एचड (Hindi>English)che belli che siete (Italian>English)行行出状元 (Chinese (Simplified)>Arabic)v (Lithuanian>Italian)couronnaient (French>German)